Imifanekiso eqingqiweyo yeNkuni kunye neNtsimbi yeZilwanyana eyenziwe nguJason Waldron [IiVidiyo] | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UYesu Arjona Montalvo | | Abadlali, Ezahlukeneyo
UJason waldron Ukhulele kumbindi weOregon apho wafaka khona uxabiso olunzulu ngezilwanyana zasendle kunye noluntu lwendalo. Dzheyson Waldron kwimisebenzi yakhe ikakhulu usebenzisa izinto zommandla wentlango ukusuka kumbindi weOregon, konke ukuphinda kusetyenziswe kwakhona kunye isikripthi Apho afumana khona iziqwenga zomthi kunye nesinyithi ezonakalisiweyo imisebenzi yokwenene yobugcisa. Ungayithenga le misebenzi yobugcisa ukuba unemali eyaneleyo.
Nantsi igalari yemifanekiso apho ungayibona khona le misebenzi mihle yobugcisa. Ekugqibeleni sikushiya enye i vidiyo womnye umsebenzi ogqityiweyo.
UJason Waldron uyayiqonda loo nto ubugcisa lulwimi, kwaye ngenxa yoko inokusimanya kubudlelwane kunye nokukhulisa uluntu. Ke ngoko, ukuthatha ithuba lomlinganiswa ongaphakathi kunye nobuhle be iinkuni kunye neentsimbi, ebahlanganisa njengamazwi asencwadini, unxibelelwano olufana nezi zixhobo sonke senziwa ngezinto zobomi kwaye njengoko evakalisa, uThixo uyabumanya ubukho bethu kwaye aphule ukuthula kuthando oluthile, apho iba bubugcisa bakhe. Kubonakala kum ukuba le ndlela yahlukileyo ibandakanya umbukeli kwincoko egqithisa ngaphezulu. Ndiyathemba ukuba ulithandile inqaku kunye nomculi.
Ngobomi bonke, ukudalwa komfanekiso oqingqiweyo kunye ilizwi likaThixo ityhila eyona nto ayiyo kunye nenjongo yam, njengoko eyichaza. UYesu ngoMoya wakho wothando kule nkqubo yokufumanisa okusemva kokubonakalisa ngaphakathi emsebenzini wam.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imifanekiso eqingqiweyo yezilwanyana ezimangalisayo eyenziwe ngomthi nangentsimbi nguJason Waldron [IiVidiyo]
USergio Diaz sitsho
Jonga Chelo, lento indikhumbuze wena.
Phendula uSergio Díaz
UChelo Criado Gonzalez sitsho
Into ebalulekileyo ... yile
Phendula Chelo Criado Gonzalez
Izibane ezinobuchule ezivumela izityalo ukuba zikhule ngaphakathi ngaphandle kwamanzi okanye ilanga elithe ngqo